Flam Iji Myrdal, Norway: A Mara mma Summer Kwụsị | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Flam Iji Myrdal, Norway: A Mara mma Summer Kwụsị
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 04/02/2020)
The Flam ụgbọ okporo ígwè akara si Flam ka Myrdal kwuru na-abụ otu n'ime ndị kasị mara mma ụgbọ okporo ígwè njem na ụwa na anyị nwere ike ịghọta ihe mere. The njem na-ewe otu awa ma ebe ndị mara mma bụ n'ezie ume-inweta. Ị gaghị agbaghara a ahụmahụ mgbe eleta Norway. Na hour njem, ụgbọ okporo ígwè na-ewe njem si Sognefjord na Flam nke dị na oké osimiri, na Myrdal ugwu ojii nke dị na 867 mita n'elu oké osimiri dị. Nke a bụ otu n'ime steepest ọkọlọtọ-nlele ụgbọ okporo ígwè e ụwa. The ụgbọ okporo ígwè akara were 20 afọ iji wuchaa. The na-agbagọkwa tunnels na-agba ọsọ na nke ugwu show anya kasị daring na ọkà engineering na Norwegian ụgbọ okporo ígwè akụkọ ihe mere eme rụtụrụla. Flam ka Myrdal, Norway: A Mara mma Summer Kwụsị bụ n'ezie a njem nke a ndụ.
Nọkwa na Flam Railway
Ewere okporo ígwè site Flam ka Myrdal ga-ewe gị site na 20 tunnels, 18 bụ ndị e wuru site n'aka, na-akwụsị ọtụtụ obodo dị ka ọ na agwọ ya ụzọ elu Flam Valley. The ụgbọ okporo ígwè na-enye njem a Jiz os ma na-agbalị na-esi na a oche na-esote a window maka kasị mma echiche na ndị a nwere ike imeghe na Summer maka ihe mmezi pụrụ iche ahụmahụ. Myrdal ojii dị elu n'elu ugwu ma ndị mejupụtara ihe ọ bụla ma a n'ọnụ ụlọ nchere, tiketi oche, na a obere Cafe. I nwere ike agba ụgbọ okporo ígwè na ala ugwu.
Flam ka Myrdal na Summer
Summer bụ a zuru okè oge na-okporo ígwè site Flam ka Myrdal. The weather bụ ọkụ na ihe niile bụ ihe green! Eche inyefe ugwu na crystal-anya na-agba ọsọ mmiri mara mma ahịhịa na okooko osisi na zuru oge ntoju. E nwekwara hiking ụzọ ụkwụ ma gaa na ma site Flam na Myrdal. Nke a pụtara na ị pụrụ banye ụgbọ okporo ígwè ruo Myrdal wee soro bulie onu azụ ala na-enwe anwụ.
Ọ bụrụ na e nwere otu ihe ị ga-eme mgbe ịga Norway, n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè site Flam ka Myrdal bụ ya. Ọ bụ a mara mma Summer stop. The ụgbọ okporo ígwè na-agba nile n'afọ na ruo 10 ọpụpụ kwa ụbọchị na Summer. Ịzụ tiketi mpaghara na Norway mgbe ọ bụla manned ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ site na-akpọ ndị NSB call center. Ha bụ ugbu a na-adịghị online. Jide n'aka na-na-esi gị tiketi maka nke a ụgbọ okporo ígwè dị ka n'oge na-adịghị dị ka ị na-abata na Norway zere mmechuihu na ahụmahụ nke a ndụ!
Anyị na-àjà European gbaa ụgbọ okporo ígwè, dị nnọọ gaa anyị Save A Train website na-enwe na-agba ịnyịnya.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/flam-to-myrdal-norway/- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#flam #Myrdal #n'oge okpomọkụ travelnorway
Gịnị bụ nnukwu uru Of Train Tickets Online?
Olee otú Iji Mkpọ N'ihi A Train njem gafee Italy